June 2015 - Page 2 of 45 - iftineducation.com
iftineducation.com – Asma oo ah ardayad wax ka barato Jaamacad ku taal dalka Suudaan ayaa Aabaheed oo ah Sheekh caan ka ah dhulka Soomaalida degto ugu deeqday Keli, xili Aabaheed uu ku jiray xaalad caafimaad daro. Asma ayaa waxaa dhalay Sheekh Aadan Siiro oo mudooyinkan ku jiray isbitaal ku yaal magaalada Hyderabad ee dalka Pakistan, halkaasoo qaliin loogu sameeyay, isla markaana…
Rumeyso ama ha rumeysan Nin jirkiisa aan waxba karin: Video
iftineducation.com – Zhao Rui oo u dhashay dalka China ayaa jirkiisa wuxuu awoodaa inuu u adkeysto biraha halista badan ee lagu duleelisada iyo kuwa kale ee korontada ku shaqeeya. Muuqaal laga argagaxo oo uu soo bandhigay telefishinka RT ayaa muujinaayoa Zhao Rui oo madaxiisa lagu duleelinayo birta taraabunada ee korontada ku shaqeyso oo awoodi weyneynso in ay duleeliso madaxiisa. Sidoo kale…
Maxamed Yare waxa uu u baahanyahay Gar Gaar Soomaalinimo+Sawiro
iftineducation.com – Maxamed Axmed Jeeylaani waa wiil 10 sano jir ah oo xaalad adag ay soo wajahday. Wiilkani yar ayaa isagoo ka yimid Dugsi Quraan xili barqo ah ayaa Gaari ka jiiray mid kamid ah Lugihiisa. Hooyadiis iyo Aabihiis waa ay dayaceen, wuxuuna la noolyahay cid ay qaraabo dhow yihiin, Lugta waa ay fash fashtay kadibna waxaa la geeyay afar kamid…
Daawo Sawirada Xeer Ilaaliyihii Guud ee dalka Masar oo Qarax Xoogan lagu dilay
iftineducation.com – Xeer Ilaaliyihii Guud ee dalka Masar Hisham Barakat, ayaa goordhaw u geeriyooday dhaawac halis ah oo kasoo gaaray qarax maanta lala eegtay gaari uu la socday. Qaraxa oo ahaa mid xoogan ayaa markii hore a sheegay in uu dhaawac kasoo gaaray Hisham Barakat, hasa ahaatee Masuuliyiin sar sare oo katirsan Dowlada Masar ayaa Wakaaladaha Warar u xaqiijiyay in uu…
Dumar badan ayaa loo furey Riwaayadan -DAAWO
iftineducation.com – Dumar badan ayaa loo furey Riwaayadan -DAAWO. Ruwaayadani oo ah Ruwaayad lamoodo maadsi iyo maaweelo laakiin waxaa ku hoos duugan aflagaado loo geestay beesha Daarood Raga ruwaayada jilaaya ayaa ka soo jeeda gobolada woqooyiga soomaaliya oo loo yaqaan soomaaliland. HALKAAN KA DAAWO RIIX
Daawo CCTV Harqaanle Gabar Kufsday Dharka Ciida u Toloyey Muqdisho Xafaada Xamarjidid
iftineducation.com – Daawo CCTV Harqaanle Gabar Kufsday Dharka Ciida u Toloyey Muqdisho Xafaada Xamarjidid Arintan ayaa ah mid ku cususb dhaqanka Soomalida iyadoo horay aan loo arag tan oo kale waxaana lala yaabnahay ayey noqotay oo aad loo hadal hayo.Ninkan Harqaanlaha ah ayaa gabartan u tolyey dharkii ciida balse markiid anbe go,aansaday in uu kufasdao laguna qabtay. GUJI HALKAAN EE DAAWO
Inta aan la i xadin ee aan magaca la iga badalin…Qiso dhab ah oo dhacday
iftineducation.com – Inta aan la i xadin ee aan magaca la iga badalin ee uuna fikir dafuhu i qaadan iga gaadhsii inaad i galiso Soomaalida.net,inta uuna soo booqan kii ku noolaa kopi paste ee isku sheegi jiray inuu yahay qoraa wayn iga gaadhsii, inta website kale oo ila mid ahi uuna isku kaysoo qurxin iga gaadhsii, inta uuna indho adaygiisa uuna…
Digniin Culus:: Siigaada oo laga soo sheegay Cudur qattar ah oo dhibaato kuu keeni kara
iftineducation.com – Waxay keentaa xiniinyaha iyo qanjirka Borostaatka oo barara, mar hadduusan qofku biyihii galay xiniinyaha galmo buuxda isaga saarayn, oo kolba markuu seegaysto qaar ku harayaan. 2­ Waxa ay keentaa geedka ninka oo jilca ooy tabardarri ku timaado, gabadhiisana galmo buuxda la gudan waaya, dabeetana guurkii cusbaa furriin ku gebageboobo. 3­ Waxa ay keentaa ninka oo degdeg u biyabbaxa, gaarsiina…
Dowlada Sacuudiga oo faragalin xoogan ku heysa Siyaasada Dalka Somalia (Sir lahelay)
iftineducation.com – Dowlada Sacuudiga ayaa lagu soo waramayaa in Dowladaha Kenya iyo Itoobiya ay ku qaalqaalineyso qeybo kamid ah Gobolada dalka Somalia. Warbixin lagu soo daabacay Websaite Caanka ah ee Wikilikes ayaa waxaa lagu sheegaay in Dowlada Sacuudiga ay faraha kula jirto arrimaha gaarka ah ee Somalia, waxa uuna Wikilikes soo bandhigay Dukumiintiyo sir ah oo muujinaaya Siyaasadda Dowladda Sucuudiga iyo…
Maamulka Gobolka Hiiraan oo digniin culus u diray Maamulka Ahlusuna Wal-jameeca (Warbixin)
iftineducation.com – Maamulka Gobolka Hiiraan ayaa qaaadacay shirka ka furmay Magaalada Dhuusamareeb ee looga soo horjedo ka iminka ka soconayo Magaalada Cadaado. Sheekh Xuseen Cismaan Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha Bulshada Gobolka Hiiraan, ayaa sheegay in Mamaulka Hiiraan uusan aqoonsan doonin natiijada kasoo baxda shirka ay Ahlusuna ku dhoodhoobeyso Magaalada Dhuusamareeb. Gudoomiye ku-xigeenka waxa uu waxa kama jiraan ku tilmaamay in Gobolka Hiiraan…